သင့်ကလေး၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသောကျန်းမာစေရန်အလေ့အထများ – Pediasure
အလေ့အကျင့်များသည် သင့်ကလေး၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကျန်းမာစေရန် ကူညီထောက်ပံ့နိုင်သည်ကို သင်သိပါသလား? အောက်ပါတို့သည်သင့်ကလေး၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးသော အလေ့အထများဖြစ်ပါသည်။
၁။ အာဟာရမျှတစွာစားသုံးခြင်းသည်သင့်ကလေး၏ကျန်းမာရေနှင့် ကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
အာဟာရမျှတစွာစားသုံးခြင်းအလေ့အထဖြစ်စေရန် ထမင်းစားချိန်တိုင်းတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအမြဲ ပါဝင်အောင်စားသုံးစေခြင်း၊ အစားအသောက်စားသုံးချိန်မကြာမြင့်စေရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ မိသားစုထမင်းစားချိန်ကိုထားရှိပေးခြင်းတို့အပြင် ကလေးများအတွက်အစားသောက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စျေးဝယ်ခြင်းတွင် ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပါ၀င်စေခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်များကို သိရှိနိုင်ပါသည်.
၂။ ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းမှုဖြစ်စေရန် လက်ကို ဆပ်ပြာြဖင့် ဆေးစေခြင်း
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုရှိခြင်းသည် ဖျားနာခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်သာသွားပြီးနောက်နှင့် အစားမစားမီတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့်ဆေးခြင်သည် သင့်ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် အကောင်းဆုံဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင့်ကလေးသည် မကြာသေးမီကဖျားနာခဲ့ပါက လူထူထပ်သောနေရာကို သွားခြင်းမှ ရှောင်ကြဥ်သင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကာကွယ်ခြင်းသည်ကုသခြင်းထက်ကောင်းမွန် ပါသည်။
သင့်ကလေးအတွက်ကျန်းမာသည့်အလေ့အထတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျန်းမာသည့်အလေ့အကျင့်များကို လိုက်နာရပါမည်။ ကျောင်းပိတ်ရက် (သို့) ကျောင်းမှာ ကလေးများကို အားကစားတစ်ခုခု လုပ်စေပါ။ တစ်နေ့တာအတွက် ရေဓာတ်လုံလောက်စွာရရှိစေဖို့ရေများများသောက်ရန်သတိပေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေဓာတ်ပြည့်ဝသည့်ခန္ဓာကိုယ်သည် အာဟာရဓာတ်ကိုပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ အားကစားများလုပ်ထားသောကြောင့် ညဘက်တွင်စွမ်းအင်များ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် သင့်ကလေးကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ပါလိမ့်မည်။
ကလေးများသည် အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်၍ အိပ်ချိန် (၁၀) နာရီ အထိလိုအပ်ပါသည်။ အိပ်ချိန်မမှန်သောက လေးများသည် ကိုယ်ခံစွမ်းအားလျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍သင့်ကလေးသည် အိပ်စက်ရန်ခက်ခဲပါက အိပ်ရာဝင်ချိန် တွင်ပုံပြင်များပြောပြ၍ ချော့သိပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါက ကလေးများသိပ်ရခက်ခဲခြင်းကို ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်။